Aqri Qodobo kuu Sahlaya in aad Horay Ka Kasbato Gabar aad Mar Dhaw Baratay. (Shukansi Fuduud) - iftineducation.com
Aqri Qodobo kuu Sahlaya in aad Horay Ka Kasbato Gabar aad Mar Dhaw Baratay. (Shukansi Fuduud)
iftineducation.com – Mudanyaal iyo warwooyin waxa halkaan idiin kugu Soo dudbin doonaa dhowr qodob oo muhiim ah in aad ogaato kuwaasoo ku sahlaya inaad durba isfahantaan oo aad isla sheeko qaadaan gabadha ama wiilka aad is barateen.
Hadii aad doonayso in qofaad dhawaan isbarateen aad soo jiidato qodobada fiiro gaar ah u yeelo.
Deganaan:- Sida marka ay diyaaradi kacayso ama degayso ee sida taxadirka ah loo wado ayaa wada hadalkuna ama sheekadu u baahan yihiin in lagu bilaabo oo lagu dhameeyo degenaan.
Isku day inaad qaab degen wax ku wado haday ahaan lahayd sheekada iyo kaftanka.
Hadalka ha dhex galin:-Ha ka dhex galin hadalka ama sheekada gabadha ama wiilka aad la sheekaysanayso, sanqadh ama hadalo la dhibsado.
Hadaba xogcuusb ayaa ku leh Markaad qofka hadlaya ka dhexgasho hadalka ayaa waxa sii dheeraanaya hadalkii uu waday qokii kula hadlahay.
U fiirso qofka kula hadlaya:- Xusuusnoow in qof kastaa u hadlo ama u sheekeeyo hab u gooni ah
Hadal macno leh:- Adiga oo iska hadla hadal aan macno lahayn ayaa ka daran adiga oo aan waxba dhgeysanayn.
Toos u fiiri:- Geesaha ama hoos ha fiirin waa muhiim inaad toos u fiiriso gabadha ama wiilka aad wada hadlaysaan.
Foojignaan:- Dhegaysigaagu ha ahaado mid dhan. Afka oo aad xirto oo aanad hadlin ma aha dhegaysigu. Laakiin waa adiga oo qalbigaaga iyo niyadaado xaadir yihiin oo aanad wax kale ku fikirn marka qof kula hadlayo.
Wax kabaro Aalad Qatar ku ah lamaanaha is Qaba oo soomaalidana Aad u isticmaasho
3 Nooc o Xaaskaga Biyaha Looga Keeno;Cirka Toogashada,Jilib joogsiga iyo Qaab Cusub